Hetsiky ny mpianatra teny Vontovorona : Nirefotra ny baomba, mpianatra telo nosamborina -
AccueilSongandinaHetsiky ny mpianatra teny Vontovorona : Nirefotra ny baomba, mpianatra telo nosamborina
10/07/2018 admintriatra Songandina 0
Nitokona indray ny mpianatra eny amin’ny Polytechnique Vontovorona omaly. Tonga teny an-toerana ny Emmo-reg ary raikitra ny fifandonana, ka niafara tamin’ny fanaparitahana ireo mpianatra tamin’ny alalan’ny baomba mandatsa-dranomaso. Ny tsy fankasitrahana ny mikasika ny rafitra Lmd izay tadiavina ampidirina eny amin’ny sampan’ny oniversite no fantatra fa nampitokona ireo mpianatra. Nidina nanao sakana izy ireo ho fanehoana ny tsy fahafaliany. Araka ny fanambaran’izy ireo, maro ny olana sedrain’ireo mpianatra ka nitambatra izany izay nahatonga ny sakan-dalana.
Ankoatra ny resaka vatsim-pianaran’ny mpianatra sy ny tambin-karaman’ ny mpampianatra izay misy fahatarany, eo ihany koa ny faharatsian’ny fitaovam-pampianarana ao amin’ny oniversite, ary nampiany ity resaka Lmd ka nahatonga ny fitokonana. Voalaza mantsy fa dia misy diploma takiana ho an’ireo mpampianatra afaka mampianatra isan’ambaratongany, fa indrindra mila mpampianatra manana diploma ambony vao afaka manao “encadrement mémoire”, araka ny fanazavana azo.
Ny mpampianatra anefa tsy ampy, ireo manana diploma tsy omena tambin-karama. Voalaza fa mpampianatra iray tsy mahazo mitana mpianatra mihoatra ny efatra, raha hanao “mémoire”, nefa eny amin’ny Politeknika Vontovorona dia efa misy mpianatra taona fahadimy, eo amin’ny 800 hanomana izany.
Manoloana ny hetsika nataon’ireo mpianatra dia voatery niditra an-tsehatra ny mpitandro filaminana ka niraradraraka ny baomba mandatsan-dranomaso nentina nanaparitahana ireo mpianatra, satria nanelingelina ny fifamoivoizana ny sakana nataon’izy ireo. Vokany, mpianatra miisa 3 no nosamborin’ny Emmo-reg, saingy efa navotsotra omaly antoandro ihany.
Nikombom-bava tanteraka ramatoa Ravalomanana Lalao, izay ben’ny tanànan’Antananarivo, na dia efa eto amin’ny tanàna izay hiadidiany aza no nandrenesana olona matin’ny pesta. Ny antony, angamba, dia tsy nanome toromarika handraisana fepetra haingana ingahy mpanolotsainy manokana ...Tohiny